Ibsaa Jireenyaa - Page 38 of 59 - In sha Allah Ilma namaa daandii qajeelumma,gammachuu fi milkaa'innaa itti akeekudha.
December 5, 2018 Sammubani One comment
Bu’uura Fiqhii (Al-Qawaa’idul Fiqhiyyah)
“Yommuu wantoonni gaggaariin baay’atan, isaan keessaa kan irra caalu ni durfama. *Mustahabba (wanta jaallatamaa) irra Waajibaf (wanta dirqama) ta’eef dursi kennama. Dhimmoonni lamaan carraa ta’uu (fudhatama argachuu) yoo qabaatan, kan irra madaala kaasutu fudhatama argata. **Wantoonni babbadoon yommuu baay’atan, isaan keessaa tokko hojjachutti yoo dirqisifaman,badiin isaa xiqqaa kan ta’e dursi kennamaaf.”
December 1, 2018 Sammubani Leave a comment
Kutaalee darban keessatti Aakhiratti amanuun maal akka ta’ee fi maal akka of keessatti qabatu ilaalle turre. Aakhiratti amanuun gammachuu fi milkaa’inna nama tokko kan murteessudha. Sababni isaas, Aakhiraan gahuumsa xumuraa namoota hundaati. Namni jireenya keessattti gahuumsa ofii yoo hin beekin, garam akka deemu hin beeku. Jireenya tana keessa maaliif akka jiraatu ni wallaala. Rabbiin subhaanahu wa ta’aalaa iddoo jireenyaa lama uumee. Tokkoffaan, iddoo jireenyaa gabaabdu taate fi qormaanni itti adeemsifamuudha. Iddoon jireenyaa gabaabdun tunis addunyaa tana. Lamaffaan immoo iddoo jireenyaa yeroo dheeraa turuu fi firiin qormaataa (jazaan) itti mul’atuudha. Kanaafu, umriin iddoo jireenya gabaabdun tuni erga xumurame booda Guyyaan iddoon jireenyaa dheeraan itti jalqabamuu ni dhufa. Kunis Guyyaa Qiyaamaa ta’a. Guyyaa Qiyaamaa kana namoonni du’an kaafamuun gara iddoo jireenyaa lammataatti oofamu.
November 28, 2018 Sammubani Leave a comment
HUMNA GARA BADIITTI NAMA DHIIBU TOO’ACHUUF
Namni tokko yommuu qophaa jiru, humni guddaan gara baditti isa dhiibu keessa isaatti ni dhooya. Yeroo interneetin babal’ate kanatti, dargaggeessi adda jiru wanta badaa ilaalun jireenya ofii ni balleessa. Yommuu interneeti irratti waan badaa ilaalu akka waan wanta nama macheessu dhugee sammuun isaa ni laamshofti,salphatti waa dagata. Tasgabbii fi nageenya hin argatu. Kanaafu furmaanni kanaa maali ree?Yommuu adda jiran humna guddaa gara baditti nama harkisu too’achuuf maloota kanniin fayyadamuuun ni danda’ama:
November 24, 2018 Sammubani One comment
Dhalli namaa guyyaa guyyaan ni du’u, akkasumas, ni dhalatu. Namoonni dhibbaatamatti lakkaawaman gara addunyaa yommuu dhufan, namoonni biroo immoo bakka isaanii gadi furuun gara Barzakh godaanu. Barzakh jechuun maal jechuudhaa? Barzakh jechuun wanta addunyaa tanaa fi Qiyaamaa jidduu jiruudha. Akka lugaatti barzakh jechuun girdoo (cufaa) wantoota lama addaan baasudha. Kanaafu, namoonni erga du’anii booda qabrii (awwaalcha) keessatti awwaalamu. Qabriin tuni barzakh isaaniif taati. Hanga Qiyaamaan dhaabbattu namoonni du’an gara addunyaa akka hin deebine isaan dhoowwiti. Qur’aana keessatti waa’ee barzakha akkana jechuun dubbata:
November 21, 2018 Sammubani Leave a comment
Iimaanni akkamitti dabala, Akkamitti hir’ataa?
Akka lugaa Arabiffaatti iimaana jechuun tasdiiq (dhugoomsu) fi iqraar(mirkaneessudha). Akka shari’aatti immoo iimaana jechuun qalbiin amanuu fi wanta qalbii keessa jiru dubbii fi hojiin dhugoomsudha. Kanaafu, iimaanni hojii fi dubbii of keessatti hammata. Hojii gaarii hojjachuun ni dabala, hojii badaa hojjachuun ni hir’ata. Akkamitti? Kana hubachuuf “hojii” fi “dubbiin” maal akka ta’an haa ilaallu. Hojii fi dubbii bakka shanitti qoodu dandeenya.
November 17, 2018 Sammubani Leave a comment
Kutaa darbee keessatti Aakhiraan maal akka ta’ee fi sababni Qiyaaman itti dhaabbattuuf muraasa isaa ilaaluf yaalle turre. Har’as itti fufuun Aakhiratti amanuun maal akka of keessatti qabatu ni ilaalla. Aakhiratti amanuun hundee iimaanaati fi nama kaafiraaf mu’mina addaan baasudha. Mu’minni Rabbii fi Aakhiratti amanuun mu’mina yommuu jedhamu, kaafirri immoo nama Rabbii fi Aakhiratti amanuu dideedha. Garuu Aakhiratti amanuu jechuun “Lubbuun namaa Jannata ykn Jahannamiin seentee qaamni immoo lamuu hin deebifamu jechuudhaa?” Namni akkana jedhee yaadu yoo jiraate kuni Aakhiratti amanuu hin jedhamu. Kanaafu, namni yaada dogongoraa kana akka sirreessuf Aakhiratti amanuun maal akka ta’ee haala armaan gadiitiin ilaalu dandeenya.
November 14, 2018 Sammubani Leave a comment
Yeroo Akkamitti saganteessu dandeenyaa?
Saganteessu (scheduling) jechuun hojii hojjataniif sa’aati qoodudha. Muxannoo irraa wanti yeroo kiyya baay’ee naaf qusate keessaa tokko yeroo saganteessudha. Guyyaa yeroo hin saganteessine, yeroon kiyyaa ni qisaasa’a. Osoo firii gaarii hin buusinii fi jeeqame oola. Dhugumatti yeroo saganteessun faaydaa hangana hin jedhamne qaba. Tolee yeroo akkamitti saganteessu dandeenyaa? Haala kanaan saganteesun ni danda’ama:
Aakhiratti Amanuu-Kutaa 1ffaa
Yoomul Aakhirah (Guyyaa Dhumaa)-jechuun guyyaa Qiyaamaa namoonni du’an qorannoo fi mindaaf itti kaafamaniidha.Aakhira jechuun dhuma ykn xumura wanta tokkoo jechuudha. Guyyaan Qiyaamaa guyyaa Aakhirah jedhamee kan waamameef yommuu warri Jannataa Jannata keessa qubatan, warri ibiddaa ibidda keessa seenan isa booda guyyaan biraa waan hin jirreefi.
Iccitii Rakkoo fi Qananii Keessa jiru
November 7, 2018 Sammubani 2 comments
Namoonni baay’een yommuu rakkoon isaanitti bu’uu ykn qananii argatan, iccitii rakkoo fi qananii kana duuba jiru hin beekan. Iccitii kana waan hin beeknef hanga Rabbii olta’aatti kafaruu gahuu. Namni iccitii ajaa’ibaa sadan kana sammuutti galfate tasgabbii argata. Sababni isaas, rakkoo fi qananiin namni argatu iccitii mataa isaanii waan qabaniif inni kana yoo beeke, yeroo rakkoo hin dhama’u, yeroo qananii daangaa hin darbu. Asi gadiitti iccitii rakkoo ykn musiibaa keessa jiruu fi iccitii qananii keessa jiru ragaalee waliin ni ilaalla.
November 3, 2018 Sammubani Leave a comment
Yaadachisaaf, Ergamtootatti amanuu jechuun haqaan Rabbiin isaan akka erge amanuu, odeefanno isaan irraa mirkanaa’e dhugoomsu fi isaan hordofuudha. Ilmi namaa jireenya tana keessatti gaafi akkana jedhu osoo of hin gaafatin hin hafu. Innis, “Eenyun yoo hordofe gammachuu fi milkaa’innatti bahaa?” Gaafi kana deebisuuf namoonni halkanii guyyaa nama hordofuu qaban barbaadu. Carraaqqi guyyoota baay’ee booda nama tokko hordofuuf ni murteessu. Ergasii daandii inni irra deemerra isaaniis deemuf tattaafatu. Tarii namni isaan hordofan kuni kufaatitti kan isaan geessu ta’uu danda’a. Fakkeenyaf, warroota filmii ilaalan yoo fudhanne, aktarii tokko hordofuuf ni murteessu. Ergasi akka inni ta’e/ ishiin taate ta’uuf ni carraaqu. Namoota meeqatu akka aktariin filmii keessaa ta’u ta’uuf carraaqanii ergasii lubbuu ofi ykn lubbuu namoota biroo galaafatan.
« 1 … 36 37 38 39 40 … 59 »
Kuusaa Select Month June 2020 May 2020 April 2020 March 2020 February 2020 January 2020 December 2019 November 2019 October 2019 September 2019 August 2019 July 2019 June 2019 May 2019 April 2019 March 2019 February 2019 January 2019 December 2018 November 2018 October 2018 September 2018 August 2018 July 2018 June 2018 May 2018 April 2018 March 2018 February 2018 January 2018 December 2017 November 2017 October 2017 September 2017 August 2017 July 2017 June 2017 May 2017 April 2017 March 2017 February 2017 January 2017 December 2016 November 2016 October 2016 September 2016 August 2016 July 2016 June 2016 May 2016 April 2016 March 2016 February 2016 January 2016 December 2015 November 2015 October 2015 September 2015
Dubbii Iimaana Diigu-kutaa 10.2
Miidhaa, Fokkinnaa fi Soba Shirkii-Seensa
Dubbii Iimaana Diigu-Kutaa 10.1
Dubbii Iimaana Diigu-Kutaa 9.2
Hiika Iimaanaa fi Arkaana Isaa
Dubbii Iimaana Diigu-Kutaa 9.1
Dubbii Iimaana Diigu-Kutaa 8.3
Dubbii Iimaanaa Diigu-Kutaa 8.2